Wasiir Hodan Shire oo u gaftay Wasiirada Dastuurka iyo Haweenka [AKHRISO] – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 26 April 2018 26 April 2018
Waxaa baraha bulshada la isla dhexmarayaa gaf la sheegay in Wasiirka Haweenka iyo arimaha Xuquuqul Insaanka ee Maamulka Galmudug, Hodan Cabdi Shire ay u geysatay Wasiirada Dastuurka iyo Haweenka ee Xukuumadda Soomaaliya.
Marwo Hodan ayaa barteeda Facebook ku weerartay Wasiirka Dastuurka, Xoosh Jabriil iyo Deeqo Yaasiin oo ah Wasiirka Haween iyo arimaha Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya.
Waxaa su’aal ay ka keentay sababta Wasiirka Dastuurka uu uga qeyb galay Shir looga hadlayay arimaha Caruurta oo ay soo qaban qaabisay Hay’addaha Arimaha Caruurta u qaabilsan Qaramada Midoobay [UNICEF].
Balse, Su’aasha is weydiinta mudan ayaa ah maxaa keenay in Hodan Cabdi Shire ay erayo nuucaasi u adeegsato Wasiiro Qaran.
Waxaa jira luqad ay iskula hadlaan Mas’uuliyiinta xilalka u haya Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Xubnaha ka ah Maamul Goboleedyada,
Tusaal ahaan, hadii mas’uul Dowladood uu dhaliil u hayo waxaa muhiim ah in uu xiriir la sameeyo shaqsiga uu dhalillayo islamarkaana ku wargeliyo, balse waxaa mas’uuliyiinta ka reeban in sidan oo kale ay baraha bulshada wax loogu weeraro.
Balse, Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Wasiir Hodan ay ka carootay sababta loogu casuumi waayay shirkaasi oo ay ka qeyb galeen Wasiiradaasi Qaran.
Waxaa muuqatay in laga wanaagsanaa erayadii ay adeegsatay Wasiir Hodan oo ka mid ah Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug.
Weli majiro wax hadal ah oo ka soo baxay Xafiisyada Wasiirada Dastuurka iyo Haweenka ee Xukuumadda Federaalka SOomaaliya oo ku aadan falkii ay ku kacday Hodan Cabdi Shire.